Campus France Madagascar - DELF DALF MADAGASCAR
Mpianatry ny sekoly ambaratonga faharoa ve ianao na mpianatra fotsiny ary maniry ny hanohy ny fianaranao any Frantsa?
Ny tanjon’ny Campus France dia ny fampivelarana ny fampianarana ambony frantsay eran-tany ary ny manolotra ho an’ireo mpianatra vahiny ny lalana ahatafitana mba hidirana amin’ireo fianarana ambony any Frantsa, avy eo amin’ny firenena iaingana hatrany amin’ny firenena mandray, manomboka eo amin’ny fampahafantarana voalohany hatramin’ny fipetrahana any Frantsa ary ny fiverenana an-tanindrazana. Manaraka anareo foana izahay amin’ny dingana rehetra : fitadiavana lalam-piofanana, fisoratana anarana amin’ny oniversite, fikarakarana ny fipetrahana, sns . Omenay anareo ihany koa ireo toro-hevitra hafa mety afaka atao amin’ny fipetrahana any Frantsa : fianarana teny frantsay, amin’ny mpiray tanindrazana, asa sy fizaran’asa.
Campus France Madagascar dia manolotra : fampahafantarana « en ligne », toro-hevitra manokana, amin’ny teny frantsay na amin’ny teny malagasy, fidirana an-sehatra ivelany amin’ireo oniversite, toeram-pampianarana ambony tsy miankina, , ireo sekoly ambaratonga faharoa frantsay eto Madagasikara na mandritra ny fampirantiana.
Ankoatra ny birao Campus France eto Antananarivo, misy ihany koa toeram-pandraisana Campus France any amin’ireo Alliances 6 any amin’ny farintany: Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Antsiranana, Toamasina, Toliary.
Aza misalasala mitsidika ny tranokalan’ny Campus France Madagascar
Posted on 10 November 2016 11 November 2016 Author olivier RipollCategories actualite ma
Previous Previous post: 2015 : taona namiratra ho an’i DELF
Next Next post: DELF DALF TP sy DELF PRO DESAMBRA 2016